Ukuqeda ama-cannabinoids kuziphuzo ezidakayo - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhiqizwa kweziphuzo ezifakwe insangu zombili, iziphuzo ezidakayo nezingezona ezotshwala, kuwumsebenzi onzima. Ukuze kuzuzwe ukuzinza kwesikhathi eside, ukubonakala okucacile kanye nokuthuthuka okufiselekayo kwama-flavour kudinga ubuchwepheshe bokuxuba osebenzayo nobunokwethenjelwa kanye ne-ejenti ehambisanayo yokuqhafaza. Ama-emulsifiers asebenza kakhulu e-Hielscher Ultrasonics angama-homogenizers asebenzayo ekukhiqizeni iziphuzo ezidakayo nezingadakwa i-cannabinoid-nanoin
Ukuqedwa kwe-Ultrasonic Cannabinoids ku-Alcohol
Ama-cannabinoids ancibilika kalula ngotshwala obungu-190 (nge-92.4% ye-ethanol ngesisindo kufinyelele umkhawulo osebenzayo wobumsulwa be-distillation). Kodwa-ke, i-190-proof alcohol iwukuphuza ikakhulukazi engafanele ngoba izinga eliphezulu lotshwala lingathinta kakhulu umzimba womuntu futhi lidale ukudakwa. Ngaphezu kwalokho, ukunambitheka kobufakazi obungu-190 akutholakali kubathengi abaningi.
Ukuze wakhe iziphuzo ezidakayo ezifakwe yi-cannabis emakethe enkulu yokusakaza, kudingeka okuqukethwe okuphansi kotshwala namaphrofayli amnandi okunambitheka. Ukuze uqede ukukhishwa kwe-cannabis njenge-CBD, i-THC kanye nokukhishwa okugcwele kwe-spectrum kuziphuzo ezidakayo, ubuchwepheshe bokuxuba obuphezulu njenge-ultrasonic nano-emulsification buyadingeka. Ukubhidliza iziphuzo zibe ama-nano-droplets bese uzixuba ngaphansi kokufakwa kwe-emulsifier ebangeni lokudla (isb. IStuph nano-emulsifier) ibe yi-nano-emulsion ecacile, ivumela ukukhiqiza iziphuzo ezihlala isikhathi eside ezifakwe insangu ezinambitheka emnandi, ukungaguquguquki, kanye ukubukeka okubonakalayo.
Ama-nano-emulsifiers e-Ultrasonic avumela ukukhiqiza iziphuzo ezidakayo nezicashile ezicacile futhi ezihlwabusayo. Isithombe sikhombisa ifayili le- I-ultrasonicator UP400ST (400W)
I-Ultrasonic nano-emulsions elungiselelwe ne-Hielscher UP400St
Ukuqedwa kwe-Ultrasonic kwama-Cannabioids kuziphuzo ezidakayo
esebenza kahle, i-homogenization esheshayo
i-nano-emulsified ye-bioavailbility ephezulu
iyahambisana nanoma iyiphi i-emulsifier
Ama-Cannabinoids we-Nano-Dissolve we-Superior Bioavailability
Ama-cannabinoid ancibilikiswa kahle ngamanzi (okuyi-hydrophobic) futhi ngakho-ke abonisa ukutholakala okuphansi ngokwemvelo.
Ukuze kutholakale imiphumela efiselekayo yemikhiqizo ye-cannabis esetshenziswe ngomlomo, isb. Iziphuzo, izinhlanganisela ezi-acitive kufanele zifinyelele endaweni yokusebenza ehlosiwe, engaphakathi lamaseli omzimba. Ukutholakala kwe-bioavailability yigama lobuchwepheshe le-pharmacology elichaza izinga nezinga lapho izinhlanganisela eziphilayo (isib. I-CBD, i-THC, i-CBG namanye ama-cannabinoids) amuncwa ngumzimba womuntu. Ama-pharmacokinetics ama-cannabinoids achaza ukumuncwa kwawo ngezinhlobo ezithile zokuphathwa nangokwakheka kwawo okuhlukile kwezidakamizwa, ukusatshalaliswa kwamakhemikhali e-bioactive emzimbeni, ukuthi ahlanganiswa kanjani nesibindi futhi ekugcineni akhishwe.
Uma kukhulunywa ngokwakhiwa kwemikhiqizo ye-cannabis esezingeni eliphakeme, ukuthola ukutholakala okuthuthukile kuyisici esibalulekile. Ukutholakala okuphezulu kokutholakala kwe-bioavailability kubanga isilinganiso sokumuncwa esiphakeme nemiphumela ethembekile yomkhiqizo ofakwe insangu. Ama-nano-emulsions, i-liposomes, ne-solid-lipid nanocarriers asetshenziswa ekwenziweni kwemithi yokwengeza, izithasiselo zokudla okunempilo kanye nokudla okuqinisiwe ukuklama imikhiqizo ene-bioavailability eyenziwe ngcono.
Ama-dissolvers nama-emulsifiers ama-Hielscher Ultrasonics asetshenziswa ku-pharma, supplement, nasekudleni & izimboni zeziphuzo ukudala imikhiqizo efakwe nano-emulsified / nano-emulsified esezingeni eliphakeme.
Ukwakhiwa kweziphuzo neziphuzo ezifakwe iTHC kuza nenselelo ekhethekile. ITHC inokunambitheka okukhulu kakhulu; kanti ngenkathi abathengi abaningi bejabulela imiphumela ethinta ingqondo ye-delta-9-tetrahydrocannabinol, bakhetha iphrofayili enambithekayo yesiphuzo. Ngakho-ke, i-nano-emulsification noma i-nano-dissolving THC ibe isiphuzo esicacile, esobala sisodwa ayisenzi isiphuzo esifanelekile. I-ejenti ye-nano-emulsifying ejwayelekile yokudla enemiphumela yokufihla ukunambitheka njenge-STUPH nanoemulsifiers iyadingeka ukunqoba iphrofayili yokunambitheka eqinile ye-THC.
I-STUPH nano-emulsifiers ingama-emulsifying emvelo asebangeni lokudla, aguqula izigaba ezimbili zikawoyela namanzi zibe isitebela esicacile, esihlwabusayo se-nano-emulsion. Ama-STUPH nano-emulsifiers asetshenziswa kakhulu ukuxuba ama-cannabinoids afana ne-THC, i-CBD, ne-CBG ekudleni, iziphuzo nezimonyo. I-STUPH nano-emulsifiers isebenza kahle kakhulu ngokuhlanganiswa ne-emulsification ye-ultrasonic kanye ne-homogenization. I-Ultrasonic high-shear homogenization yama-nanoemuslions esebenzisa i-STUPH nanoemulsifiers yenza lula futhi isheshise ukulungiswa kweziphuzo ezisezingeni eliphakeme, ezisobala neziphuzo ezingekho zotshwala ngokunambitheka okukhulu. Ukusetshenziswa kwe-Stuph nano-emulsifiers kunciphisa okokufaka kwamandla kwe-ultrasonic ukwakha i-nano-emulsions yesikhathi eside, ecacile.
Njengoba unolwazi ngezinqubo ze-ultrasonic emulsification, iStuph Corp isivele isebenze namakhasimende amaningi akwaHielscher ebonisana futhi ebasiza ukuba benze ama-nano-emulsions asezingeni eliphakeme asetshenziselwa iziphuzo, izithako zokuthambisa, ukudla okudliwayo nemikhiqizo yezimonyo.
Ukuba sebangeni lokudla, ama-surfactants anelebula elihlanzekile anambitheka kakhulu, angaphazamisi ukunambitheka kokugcina komkhiqizo wakho, i-Stuph Corp. nano-emulsifiers yenza kube lula ukukhiqizwa kwama-emulsion we-nano-enhanced ane-bioavailability ephezulu.
Ngeminye imininingwane mayelana nama-STUPH nanoemulsifiers namasampuli, sicela uvakashele Www.stuphcorp.com!
I-STUPH Nano-Emulsifiers shazi
Ama-nano-emulsifiers eziphuzo nokudla
I-nanoemulsions ecacile, esobala
I-Ultrasonicator I-UIP2000hdT nge-flow cell yokukhiqiza okusemgqeni kweziphuzo ezifakwe insangu
Kungani iNanoemulsion inokutholakala okuphezulu?
Imikhiqizo ye-cannabis ye-nano-emulsified ukusetshenziswa ngomlomo / ukuphathwa inikeza ukutholakala okuphezulu kakhulu ngoba ifomu le-nano livumela izinhlanganisela ze-bioactive (ie i-THC, i-CBD, i-CBG njll) ukudlula okungathinteki ngaphezulu kwendlela yokugaya ukudla. Imikhiqizo ye-cannabis ye-Ultrasonically nano-emulsified cannabis ikhombisa ukuncibilika emathunjini, imuncwa kangcono ngodonga lwesisu, futhi ayinamandla kakhulu emzimbeni ngesikhathi sokudlula kokuthoma. Lokhu kusho ukuthi, ama-ultrasonically nano-emulsified cannabis phyto-compounds afinyelela ezingeni eligcwele futhi esimweni esithe xaxa ekusakazeni kwegazi lomzimba futhi kamuva angene kumaseli kunamakhemikhali, angafakwanga ku-nanoemulsion.
Isizinda se-Ultrasonic singasetshenziswa ukukhiqiza iziphuzo ezingafakwa utshwala kanye notshwala ezifakwe i-cannabis. Isibonelo, ukusebenzisa i-sonication ukufaka isiphuzo esine-cannabis namanye ama-botanicals kungathuthukisa ukunambitheka futhi kungeze ezinye izinhlanganisela ezandisa impilo.
I-Ultrasonic Nano-Infusion isebenza nge
noma isiphi isiphuzo esidakayo kanye nengeyona into efana notshwala
ama-bitters (isib. amaro)
iziphuzo zokuxuba utshwala
ama-seltzers / amanzi akhanyayo
iziphuzo zezithelo, ulamula
Amaprosesa we-Ultrasonic High-Shear Wokuqedwa kanye ne-Emulsification
I-Hielscher Ultrasonics inikela ngemikhiqizo ebanzi yama-ultrasonicators aphezulu wokusebenza kwama-nano-emulsifying cannabinoids kuziphuzo ezidakayo nezingezona ezidakayo. Iziphuzo ezifakwe insangu neziphuzo ezidakayo (isb. Iziphuzo ezidakisayo, i-alcohol, i-cocktails) zingenziwa ngokuxuba i-phyto-cannabinoids efana ne-CBD, iTHC noma ukukhishwa kwe-cannabis egcwele ngokuphelele kuziphuzo eziphuzwayo.
I-UIP4000hdT, i-4000watts enamandla yezimboni zesheya ephezulu yokugunda yokukhiqiza okusemgqeni kweziphuzo ze-cannabis ezifakwe nano / nano-emulsified.
Isitshalo seCannabis sativa siqukethe amakhemikhali angaphezu kwamakhulu amahlanu ahlukene – okuthiwa ama-phyto-cehmicals – , kufaka phakathi okungenani ama-cannabinoids ayi-113. Ama-cannabinoids akhiwe kahle kakhulu yi-CBD ne-THC.
I-Cannabidiol noma i-CBD iyinhlanganisela etholakala esitshalweni se-cannabis – ku-hemp nensangu – futhi yaziwa ngemiphumela yokuphumula nokulwa nokuvuvukala. I-Cannabidiol iyi-phytocannabinoid engeyona eye-psychotomimetic. Lokhu kusho ukuthi, i-CBD, ngokungafani ne-THC, akuyona i-psychoactive / psychotropic, okusho ukuthi ngeke ikukhuphule. I-CBD iyatholakala njengowoyela, imixube, ngezimpahla ezidliwayo, amaphilisi, ijusi ye-vape, kanye neziphuzo ezingezona iziphuzo ezidakayo.
ITHC, i-delta-9-tetrahydrocannabinol, iyinhlanganisela ye-bioactive esitshalweni sensangu, esaziwa kakhulu ngemiphumela yaso yokusebenza kwengqondo. I-Psychoactive noma i-psychotropic isho ukuthi i-THC idala "ukusebenza okuphezulu".